သံလွင်မြစ်ရေ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ဘားအံမြို့အနိမ့်ပိုင်း ရပ်ကွက်အချို့တွင် ရေများ ဝင်ရောက? - Yangon Media Group
သံလွင်မြစ်ရေ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် ဘားအံမြို့အနိမ့်ပိုင်း ရပ်ကွက်အချို့တွင် ရေများ ဝင်ရောက?
ဘားအံ၊ ဇူလိုင် ၂၃
ကရင်ပြည် နယ် ဘားအံမြို့တွင် မိုးအဆက် မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် သံလွင် မြစ်ရေ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး အနိမ့်ပိုင်း ရပ်ကွက်အချို့သို့ ရေများဝင် ရောက်လာမှုကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများအား ရေဘေးကယ်ဆယ် ရေးစခန်းဖွင့်လှစ်ကာ ပြောင်းရွှေ့ နေရာချပေးထားရကြောင်း ဘားအံ မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှ သိရသည်၊၊
သံလွင်မြစ်ရေသည် ဇူလိုင် ၂၂ ရက် ည ၈ နာရီခွဲအချိန် တိုင်းထွာချက်အရ ၈ဝ၆ စင်တီမီတာဖြစ်ပြီး စိုးရိမ်ရေအမှတ်မှာ ၇၅ဝ စင်တီမီတာဖြစ်သည့်အတွက် စိုးရိမ်ရေမှတ်သို့ ကျော်လွန်ရောက် ရှိနေကြောင်း ဘားအံမြို့နယ် မိုး လေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာနရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်၊၊ ”ဇူလိုင် ၂၂ ရက် ညနေပိုင်းလောက်ကနေ ရေတွေစဝင်လာတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း မိုးကအဆက် မပြတ်ရွာနေတာ၊ နှစ်တိုင်း ဒီအချိန်ဆို သံလွင်မြစ်ရေက တက်နေကျပဲလေ။ မြစ်ရေတက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ဘားအံမြို့ထဲက အနိမ့်ပိုင်းရပ်ကွက်တွေမှာ ရေတဖြည်းဖြည်း ဝင်လာတော့တာပဲ။ အခုကတော့ ရွှေယဉ်မျှော်ဘုရားမှာ ကယ်ဆယ် ရေးစခန်းတစ်ခု အရင်စဖွင့်ပေး ပြီး ဒီရပ်ကွက်ထဲကမိသားစုတွေ ကို ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးတယ်” ဟု ဘားအံမြို့ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်မှဒေသခံ ဦးစောဖိုးထူး က ပြောသည်၊၊
ရွှေယဉ်မျှော်ဘုရား ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင် ဇူလိုင် ၂၂ ရက်ည ၈ နာရီအထိ အိမ် ထောင်စု ၁၁ဝ ၊ လူဦးရေ အမျိုးသား ၂၉၄ ဦး၊ အမျိုးသား ၂၉၈ ဦး၊ စုစု ပေါင်းလူဦး ရေ ၅၉၂ ဦးရှိကြောင်း ယင်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှသိရသည်၊၊ အဆိုပါ အိမ်ထောင်စုများအား ဘားအံခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူး ဒုတိ ယ ရဲမှူးကြီးဇော်ဝင်း၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကျော်သန်းနှင့် မြို့ မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးဝင်းနိုင်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ နယ်မြေခံတပ်မှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရဲခိုင်ဦးစီးသော အရာရှိများ၊ အခြားအဆင့်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များကတပ်ဖွဲ့ပိုင်ယာဉ်များဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားပေးခဲ့ ကြောင်းသိရသည်၊၊
ထို့အတူ မြဝတီမြို့နှင့် နှစ်မိုင်ကွာရှိ ရေပူကျေးရွာ၌လည်း ရေ ကြီးရေလျှံမှုကြောင့် နေအိမ်ခေါင် မိုးအထိနစ်မြုပ်နေပြီး ဒေသခံအိမ် ထောင်စု ၂ဝ၂ စုမှ လူဦးရေ ၄၅၅ ဦးသည် ရေပူအလယ်တန်းကျောင်း ၌ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကယ်ဆယ် ရေးစခန်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင် ကြရပြီး ဇူလိုင် ၂၃ ရက်တွင် ရေ ပြန်လည်ကျဆင်းနေ၍ ရေဘေး ရှောင်ပြည်သူအချို့ နေအိမ်များသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာနေကြကြောင်း သိရသည်။
ကလေးဘဝက အိပ်မက် ပြည့်ဝခဲ့သော Camila Cabello